Jeneral C/laahi Gaafow Maxamuud Oo Ah Taliyaha Hogaanka Socdaalka Iyo Jinsiyadaha Ayaa sheegay inay ka war Hayaan Dadka la Shaqeeya Magafe ee ku sugan Dalka – STAR FM SOMALIA
Markii ugu horeysay Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Federalka Somaliya ayaa cadeysay inay jiraan dad la shaqeeya nin Somalida ay u bixiyeen magaca Magafe oo ku sugan dalka Libya, kaasi oo qafaasha dadka tahriibka ah, kadibna lacag madax furasho ah ku sii daaya.
Jeneral C/laahi Gaafow Maxamuud oo ah Taliyaha Hogaanka Socdaalka Iyo Jinsiyadaha, ayaa sheegay inay ka war hayaan dadka la shaqeeya Magafe ee ku sugan dalka, wuxuuna sheegay inay ku daba jiraan dadkaasi sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen.
Gaafoow inkastoo uusan sheegin dalka meesha ay ka joogaan dadkaan Magafe la shaqeeya, laakin wuxuu xaqiijiyay jiritaanka dadkaasi.
Sidoo kale Taliyaha Hogaanka Socdaalka iyo Jinsiyadaha Dowladda Somaliya, ayaa uga digay waalidiinta Somaliyed inaysan caruurta Tahriibka u dirin, maadaama qatar badan lagala kulmo tahriibka.
“Horta tahriibka waa la soo yareeyay waxaa la rabaa marka waalidiinta iney gacan ka geystaan in ilmahooda aysan u ogolaan ma gefayaasha, markii Liibiya lagu qabsado ilmahooda waa ay wel welayaan.” Ayuu yiri Jenaraal Gaafoow oo la hadlay Radio Muqdisho
Hadalka Taliyaha ayaa ku soo aadaya, xilli ay jirto hadal hayn badan oo ku saabsan Koox la shaqeysa Magafe inay ku sugan yihiin Magaalada Muqdisho.
Dhalinyarada Somaliyeed ayaa si weyn u dareensan dhibaatada uu leeyahay Tahriibka iyo qatarta adag ee lagala kulmo, hadana kuma tusaalo qaataan dhacdooyinka maalin waliba taagan ee tahriibka lagala kulmo.
Dawlada Udanda Ayaa Taliye cusub u magacawday ciidanka Amisom ee ku sugan Degmada Janaale